Ngwaọrụ WordPress: PostPost (Emelitere) | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 18, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
update: Ebugharịla mgbakwunye a na peeji nke M na emelitere:
PostPost - A WordPress ngwa mgbakwunye ebe ahaziri ọdịnaya n'ihu na mgbe ọ bụla post gị na saịtị ma ọ bụ ndepụta gị.
Edere m ngwa mgbakwunye a mgbe m gbalịrị itinye mgbasa ozi na ndepụta m naanị m na iwe. Ọ bụ ngwa mgbakwunye mbụ 'zuru ezu' mana echere m na edere ya nke ọma. Achọpụtara m n'ezie na ngwa mgbakwunye ụlọ ọrụ tinye n'ọrụ Mfe Echiche 'Nwebisiinka Ntanetị. Eji m rụọ ọrụ nke Ryan Duff si WP Kpọtụrụ plugindị ngwa mgbakwunye iji dee ya ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezigbo ngwa mgbakwunye ibudata ma mụta otu esi dee ngwa mgbakwunye ebe ọ dị mfe.
Feb 17, 2007 na 2:26 PM
Doug - Nke a di egwu. Anọ m na-ede akwụkwọ nke m na-enwe olileanya na onye ọzọ ga-eme ya. Anaghị m agba mgbasa ozi, mana m na-eme atụmatụ inwe ụfọdụ nri naanị ihe na-abịa. Nke a ga-ezu oke. Daalụ!
Feb 17, 2007 na 3:44 PM
Daalụ Tony! M ga-kwalite ya na di na nwunye na-esonụ izu na ihe Admin interface. Adị m ọhụrụ na ide Plugins yabụ ọ na - aga nwayọ.
Feb 18, 2007 na 6:47 PM
Naanị FYI, edegharịrị m ngwa mgbakwunye ahụ ma zipu ya ọzọ. Ihe mbụ ahụ dị mma, mana nwelite ahụ nwere njikwa zuru ezu na ya! Edenyekwala m akwụkwọ a.
Feb 18, 2007 na 6:51 PM
Jụụ. Somebody nwere fun na-arụpụta izu ụka 😉
Feb 18, 2007 na 6:55 PM
Nke ahụ bụ! Ọ bụ otu n'ime ihe mgbaru ọsọ m maka 2007 ide ihe mgbakwunye m site na ncha. Emego m ọtụtụ ndị ọzọ plugins mana nke a bụ nke mbụ m weere. A na-eji ya ugbu a ijere Google Mgbasa ozi m n'okpuru ọkwa ọ bụla yana mgbasa ozi RSS RSS m.
Ihe dị ụtọ… na ihe mgbaru ọsọ 2 gbadara! (Otu n'ime ndị ọzọ bụ ga-aba n'ime Top 5,000 na Technorati… M kụrụ na ugbua ma ọ bụ na-enyemaka nke ọtụtụ “Z-List” posts, otú ahụ ka m ga-eche stats ka ígwè onwe ha tupu m usọrọ) .
Feb 18, 2007 na 7:20 PM
MEE! Achọpụtara m na ọ gosipụtara na peeji nke posts… so I just modified it and released 1.1.1. Echere m na nke ahụ bụ a tọhapụ ọsọ ndekọ! Ugbu a ị nwekwara ike hazie ọdịnaya tupu na mgbe ibe ahụ gachara.
Feb 19, 2007 na 2:08 PM
Daalụ maka nke a, otu echiche dị ọsọ maka gị n'agbanyeghị - Ekwenyere m na Google AdSense tinye njedebe nke 4 (5?) Mgbasa ozi kwa ibe, yabụ ọ bụrụ na ị gbakwunye koodu AdSense mgbe / tupu ọkwa ọ bụla, ma ị nwere nhọrọ edobere karịa 5 posts elere anya na ibe, enwere ike inwe nsogbu.
Achọpụtaghị dịka mkpesa, ebe ọ bụ na anaghị m eji ha ọzọ (kwụsị akaụntụ m:
Feb 19, 2007 na 5:58 PM
Aga m elele na Chris! Ana m anwa 'egwuri egwu' n'echiche nke enweghi, na ntinye nke ndi a. Dị ka nke ọma, M ga-arụ ọrụ na nkụnye eji isi mee na n'okpuru customization. Edere ngwa mgbakwunye ahụ nke ọma ('agbaziri m' akụkụ ndị ọzọ site na ngwa mgbakwunye ndị ọzọ edegoro nke ọma) yabụ aga m agbasa ya.
Feb 20, 2007 n’elekere 12:47 nke abali
Ọ dị mma, daalụ maka ozi ahụ, yana azịza ọsọ ọsọ, nwere ekele.
Feb 20, 2007 n’elekere 8:51 nke abali
Amaghị m otú ha Iwu Iwu ekwesịrị itinye ya n'ọrụ. Ọ na-ekwu na enwere ike ịnweta mgbasa ozi 2 kwa ngwaahịa. Nke ahụ bụ ihe na-adọrọ mmasị…, Ọ bụrụ na m nwere 8 posts (ngwaahịa) na peeji nke nwere Google Ad n'okpuru nke ọ bụla, echeghị m na m na-emebi iwu ha.
Ahụrụ m ụfọdụ iwu ochie ebe o kwuru 4 kwa ibe - mana ndị ahụ yiri ka ọ gafeela. Ikekwe n'ihi ọnọdụ ndị dị ka nke a. Na-akpali mmasị! Achọpụtakwara m na mgbe ụfọdụ mgbasa ozi bụ ọ bụghị sitere na edemede - a na m eche ma ha nwere usoro nchịkwa dị n'ime ya.
Feb 20, 2007 na 1:53 PM
ah OK, ya mere enwere m ozi ochie n'isi m, daalụ maka mgbazi ahụ.
Ndewo, laghachi ọzọ. Daalụ maka e-mail gị, gbaghara gị iji iwe oge.
Otu arịrịọ, na chinchi abụọ.
Ọfọn chinchi nwere ike ịbụ na m isiokwu, m na na na na…
1 - Ọ ga - ekwe omume ịgbanwe oge mgbasa ozi etinyere n'etiti posts - Ọ dị m ka enwere m ọtụtụ mgbasa ozi na saịtị m: Enweghi ike iji ntinye ederede na ntinye ederede tinye na WP. Ihe Nlereanya, ị dee a gbara, biputere a ole na ole ndị ọzọ posts, wee hichapụ ihe. Ọ gwụla ma enwere ihe ọzọ kpatara post m abụghị nke na-aga n'ihu, ị ga - ejedebe usoro dịka 431,433,434. Amaghị na ọ dị mfe ịmejuputa ụdị nhazi POST_AD_POST_POST_AD_POST_POST, echiche ọ bụla?
2 - (Naanị) Mgbe ị na-elele posts site na ịpị Otu m, ọtụtụ mgbe a naghị atụgharị koodu mgbasa ozi - nke a yiri ka ọ na-eme na obere posts. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gaa na saịtị m wee pịa otu eserese eserese, ihe izizi atọ gosipụtara koodu ahụ, ọ bụghị mmepụta.
3 - egosighi na ọ na-arụ ọrụ mgbe ị na-arịọ mgbasa ozi na ngalaba ụkwụ.
Dị ka m kwuru, nsogbu ndị a nwere ike ịdabere na isiokwu m na-eji (Anaconda, lelee saịtị m maka njikọ), naanị m na-atụ anya ị nweta ntinye gị na nke a mgbe ị nwetara oge…
Ekwesịrị m iwelata mgbasa ozi ọ bụla, dị ka ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ kwuru banyere ọdịdị nke obere posts mgbe elelere ya site na njikọ otu.
Ọ bụrụ n'ịchọta nkeji oge 5/10, ị nwere ike ịkpọtụrụ m, m ga-enwekwa ọilyụ tinye koodu ahụ ọzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta nsogbu a.
Mee 29, 2007 na 3: 52 AM
Ana m eche na a naghị enyocha post a ọtụtụ mgbe?
Agbalịrị m ịlele ebe oru ngo ahụ, mana enweghị m ike ịhụ ngalaba nkọwa, yabụ zitere gị obere oge.
Anaghị m eji mgbasa ozi n'otu ụzọ ahụ, mana na-eche ma ndị ọrụ ndị ọzọ ha ka nwere ike ịchọta atụmatụ ndị m kpọtụrụ aha n'elu.
Mee 29, 2007 na 7: 54 AM
Ooooo! Ndo, Chris! Agbaghara m ikwu a maka ụfọdụ ihe kpatara ya. Enwere m ọtụtụ mmụba nke m ga-achọ ime na ọrụ ahụ, naanị m kwesịrị ịgakwuru ha!
Mee 29, 2007 na 11: 36 AM
np, obi dị m ụtọ na ị hụla ihe a kwuru. You nwetara ozi-e na-akọwa etu esi dị na peeji nke otu, a na-atụgharị mgbasa ozi mgbe ụfọdụ na-enweghị atụgharịrị ya? Amaghị nke ọma na ọ bụ otu ahụ ka ị ga - esi jiri teknụzụ kọwaa ya, mana kama ịkpọsa ya, ahụrụ m html maka ya kama…
Enweghị ọsọ ọsọ rịọrọ n'akụkụ m - ana m atụgharị ihe ndị ọzọ n'anya ugbu a…
Jenụwarị 5, 2008 na 3:13 PM
Wepụtara PostPost 1.2.0 taa! Ọ na-eji ọrụ is_single nke WordPress eme ihe n'ihi ya, ị ga-enwe ike biputere ihe tupu ma ọ bụ mgbe otu post peeji.
Enweghị m ike ịnweta ya na blọọgụ m n'agbanyeghị. M na-agụ na nkwado WordPress na ụfọdụ ndị ọzọ na-enwe nsogbu na ndebiri ha na ọrụ is_single. Ọ naghị agbaji ihe ọ bụla, ọ naghị egosipụta ihe ọ bụla.
Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka blog gị, agbanyeghị!
Ọ bụghị (Ana m eji isiokwu Big Blue). Ohere ọ bụla iji dozie nke a? 🙂
Dec 10, 2008 na 3:30 PM
Doug: nkwụnye dị mma - obere & mfe. Ana m eji ndabara WordPress isiokwu (v 1.6) na “After Single Post on Page” nhọrọ adịghị ka ọ na-egosipụta ihe ọ bụla.
Ever nwetụla mgbe ị kwụsịrị nsogbu is_single?
Dec 10, 2008 na 3:40 PM
Nnọọ, Dr. Jim!
Ahụbeghị m Uchechukwu nsogbu edozi site na WordPress n'oge a. Aga m ewere okpukpu abụọ na koodu ahụ, mana m ji n'aka na ngwa mgbakwunye ahụ dị mma.
Dec 10, 2008 na 10:25 PM
Doug: Daalụ maka azịza ọsọ ọsọ! Yabụ, Echere m na emere m ajọ ọrụ nke ịjụ ajụjụ m. Ọ dị ka m nwere nsogbu ụfọdụ etu PostPost si arụ ọrụ na blọọgụ m kpọmkwem na nhọrọ ngosi ngosi otu.
Ọ bụghị na ọ dị mkpa n'ezie, mana blọọgụ m dị na:
Ọ dị ka gị na onye na - ekwu okwu (nke ahụ bụ okwu?) Na - atụle nsogbu a na mbido afọ 2008.
Ọ bụ nsogbu laa azụ n’oge ahụ? Mgbe Single Post na peeji nke? rụọ ọrụ na blog gị taa?
Achọrọ m ikweta na m kụziri ihe, ma ihe mbụ m na-eme bụ ịchọpụta ma onye ọ bụla ọzọ na-enwe otu nsogbu.
M lere anya na koodu gị ma ọ dị mma & dị ọcha, yabụ ugbu a, m na-ata ụta "is_single".
Mee ka m mara ihe ị chere.
Dee 17, 2008 na 9: 19 AM
Ana m agbalá »‹ itinye PostPost ngwa mgbakwunye na á »na-ará» great nná »á». Ana m etinye nkwado mgbe ọ bụla ederede mana enwere m nsogbu. A na-egosipụta nkwalite ahụ na edemede / homepage ebe m debere mkpado ndị ọzọ. Nkwalite ahụ na-egosi mgbe G linkỌ ỌZỌ njikọ. Enwere ụzọ anyị nwere ike isi dozie ya? Egosighi mgbe GADKWUO njikọta ??